पत्र मर्ज विजार्ड - ठेगानाहरू
खोल्नुहोस् ठेगाना सूची संवाद, जहाँ तपाईँं ठेगानाहरूका लागि डेटा स्रोत रोज्नुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ ठेगानाहरू थप गर्नुहोस्, वा नयाँ ठेगाना सूचीमा टाइप गर्नुहोस्.
यो कागजातले ठेगाना ब्लक समावेश गर्दछ
पत्र मर्ज कागजातका लागि ठेगाना ब्लक थप गर्नुहोस्.
ठेगाना ब्लक सजावट चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
खोल्नुहोस् चयन ठेगाना ब्लक संवाद.
मिल्दो फाँट संवाद खोल्दछ ।
अघिल्लो र पछिल्लो डेटा रेकर्डबाट सूचना पूर्वावलोकन गर्न ब्राउज बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।
Title is: पत्र मर्ज विजार्ड - ठेगानाहरू